Pep Guardiola oo ka hadlay wararka mid ka mid ah xiddigaha Man City la xiriirinaya kooxda Barcelona – Gool FM
Dajiye July 9, 2020
(Manchester) 09 Luulyo 2020. Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu sii joogo daafaca da’ada yar ee Eric García garoonka Etihad.
Dhinaca kale macalinka reer Spain ee Pep Guardiola ayaa cadeeyay in go’aanka ugu dambeeya uu ku jiro gacanta xiddiga reer Spain, kaasoo yabooh ka helaya kooxda Barcelona.
Sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada Spain Barcelona ayaa xiiseeneysa saxiixa Eric García oo 19 jir ah, kaddib markii uu bandhig fiican ka sameeyay kulamadii uu ka soo muuqday kooxdiisa Manchester City.
Eric García ayaa ka soo baxay akaadeemiyada kooxda Barcelona, balse wuxuu ka tagay sanadkii 2018, si uu ugu biiro naadiga Manchester City.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Sport” ee dalka Spain Pep Guardiola ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay wararka Eric García la xiriirinaya kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“Ku biirista Eric García ee kooxda Barcelona? Wali waxaa qandaraaskiisa kooxda Manchester City kaga harsan in ka badan hal sano”.
“Haddii Barcelona ay rabto inay la soo saxiixato waa inay la xiriirtaa ciyaaryahanka, anagana waxaan isku dayi doonnaa inaan ka dhaadhicinno inuu sii joogo”.
“Waan hubaa inuu sii joogayo kooxda, qof walba wuu ka war qabaa inaan rabno inuu sii joogo kooxda, ha ahaato ehelkiisa ama wakiilkiisa, laakiin dhamaadka arrinta go’aanka wuxuu ku noqon doonaa isaga, sida wixii ka dhacay heshiiskii Leroy Sané”.
Waxaa xusid mudan in heshiiska Eric García ee kooxda Manchester City uu dhacay xagaaga 2022.
Kulamada CAAWA laga ciyaarayo horyaalka La Liga iyo saacadaha ay soo galayaan